Mgbapụta maka tebụl mbata na ọpụpụ emelitere - Mbata Na Ọpụpụ
kedu ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru gbasara unicorn
kedu ihe kpatara na iphone ihuenyo m na -acha odo odo
data ekwentị anaghị arụ ọrụ na iphone
Tebụl iyi maka mbata na ọpụpụ
Tabla De Affidavit Para Inmigracion
Tebụl iyi maka mbata na ọpụpụ 2019 - 2020 . A Nkwupụta nke nkwado ego Ọ bụ akwụkwọ nke mmadụ bịanyere aka na ya ịnakwere ibu ọrụ ego maka onye ọzọ, na -abụkarị onye ikwu, onye ga -abịa biri na -adịgide adịgide na USA .
Onye bịanyere aka n'akwụkwọ nkwupụta ahụ na -aghọ onye nkwado nke onye ikwu (ma ọ bụ onye ọzọ) na -abịa ibi na US Onye nkwado bụkarị onye na -arịọ arịrịọ maka ndị mbịarambịa maka onye ikwu.
Nkwupụta nke nkwado ego bụ nke iwu kwadoro. Ọrụ onye nkwado ahụ na -adịkarịkwa irè ruo mgbe onye ezinaụlọ ma ọ bụ onye ọzọ ga -abụ nwa amaala US, ma ọ bụ ruo mgbe a ga -enye ya ọrụ nkeji iri anọ ( na -emekarị afọ 10 ).
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịmalite ijuputa Ụdị I-864 , akwụkwọ nkwado, ị nwere ike ịnọ na -eche ka onye nkwado gị ga -esi mezuo ihe achọrọ ego iji bụrụ onye nkwado gị. Ihe akaebe enyere ga -egosi na onye nkwado ezinụlọ gị zuru oke karịa ọkwa ịda ogbenye gọọmenti etiti .
Ntozu maka nkwado mbata na ọpụpụ nke onye ikwu mba ọzọ
Onye nkwado ga -egosi na ego ha na -enweta dịkarịa ala 125% nke ọkwa ịda ogbenye gọọmentị etiti. Ị nwere ike ịhụ na tebụl na -esote ọnụọgụ mmadụ nọ n'otu ezinụlọ, akwụkwọ ntuziaka yana 125% nke ntuziaka ahụ
* Tebụl a metụtara naanị ndị steeti 48, ewezuga Alaska na Hawaii.
Tebụl iyi maka mbata na ọpụpụ 2019 - 2020
Ndị a bụ obere ihe na -amalite site na Jenụwarị 15, 2020
Ego mbata maka ndị agha NON iji kwado onye otu ezinụlọ
Ezinụlọ Alaska Hawaii Steeti ndị ọzọ na PR
1 $ 19,938 $ 18,350 $ 15,929
2 $ 26,938 $ 24,788 $ 21,550
3 $ 33,938 $ 31,225 $ 27,150
4 $ 40,938 Bụ 37.663 $ $ 32,750
5 $ 47,938 $ 44,100 $ 38,350
6 $ 54,938 $ 50,538 $ 43,950
7 $ 61,938 $ 56,975 $ 49,550
8 $ 68,938 $ 69,850 $ 55,150
Ego kacha nta maka ndị agha iji kwado onye otu ezinụlọ
Ezinụlọ Alaska Hawaii Steeti ndị ọzọ na Puerto Rico
1 $ 15,950 $ 14.680 $ 12,760
2 $ 21,550 $ 19,930 $ 17,240
3 $ 27,150 $ 24,980 $ 21,720
4 $ 32,750 $ 30,130 $ 26,200
5 $ 38,350 $ 35,280 $ 30,680
6 $ 43,950 $ 40,430 $ 35,160
7 $ 49,550 $ 45,580 $ 39,640
8 $ 55,150 $ 50,730 $ 53,080
Otu esi aghọta tebụl ego kacha nta
Nke a pụtara na onye isi ezinụlọ nwere ezinụlọ nwere mmadụ anọ na -ekwe nkwa ịkwado ya ga -enwerịrị opekata mpe $ 46,125 kwa afọ.
Ndị nkwado bụ ndị otu ndị agha US ga -aharịrị ọkwa ịda ogbenye gọọmentị etiti.
Otu esi aghọta okpokoro
Enwere ụdị maka ndị agha nọ n'ọrụ ndị bụ ndị otu ndị agha, ndị agha mmiri, ndị nche n'ụsọ osimiri, ndị agha ụgbọ elu, ma ọ bụ ndị agha mmiri ga -enwerịrị ego ruru 100 % nke ego atọrọ ka akara ịda ogbenye ma ọ bụ ọnụ ụzọ , nke bụ ego gọọmentị na -edobe kwa afọ.
Ma ọ bụ nke na -egosi na tebụl dị n'elu na kọlụm kwuru: ndị agha. Esemokwu ndị a dabara na ọnụ ọgụgụ ndị ezinaụlọ nke onye na -achọ akwụkwọ.
Maka ndị na -abụghị ndị agha, a na -etinye ego dị iche iche dabere na ebe ha dabere. Yabụ, ndị na -akwado ibi n'ime Alaska Ha ga -egosipụta ego opekata mpe pasent 125 nke ịda ogbenye maka steeti ahụ, nke agbakọọlarị maka afọ a ma bụrụ nke pụtara na tebụl dị n'elu n'okpuru aha steeti ahụ. Otu ihe ahụ metụtara ndị bi na Hawaii.
N'ikpeazụ, ndị nkwado na -abụghị ndị agha ma ọ bụ ndị bi na Alaska ma ọ bụ Hawaii ha ga -egosiputa ego karịrị pasent 125 nke ahịrị ịda ogbenye nke iwu setịpụrụ maka ihe a maara dị ka steeti 48 na -aga n'ihu. Na mgbakwunye, nke a metụtakwara Washington DC na Commonwealth nke Puerto Rico. Ha bụ ego egosiri na tebụl dị n'elu na kọlụm n'okpuru steeti ndị ọzọ na PR (Puerto Rico).
Achọrọ ego maka akwụkwọ I-864
Na -esote, ị ga -achọ ikpebi ma ego ezinaụlọ gị opekata mpe pasent 125 nke ọkwa ịda ogbenye gọọmentị etiti dabere na nha ezinụlọ. Iji Ụdị I-864P
Ụdị I-864P gụnyere ọtụtụ tebụl. Ego ole achọrọ ka ọ karịa ọkwa ego ịda ogbenye dabere na ebe onye nkwado bi (ma ọ bụ na steeti iri anọ na asatọ, Alaska, ma ọ bụ Hawaii) yana ọnụ ọgụgụ ezinụlọ onye nkwado. Ọrụ agha na -arụ ọrụ nwekwara ike imetụta ọkwa ego.
Ego ugbu a
Ịkwesịrị inwe ike gbakọọ ego nke gị ugbu a. Imezu ihe achọrọ dabere na ego ị na -akpata kwa afọ. Ọ bụrụ na ị nwere naanị otu ọrụ, nke a dị mfe. Tinye ego ị tụrụ anya ime na njedebe nke afọ. Gụnye ego ọ bụla ma ọ bụ mmụba ụgwọ ọnwa nke ị nwere ike ịtụ anya na ị ga -enweta. Ụdị ego ndị a na -adabere na ego gị ugbu a:
Ụgwọ ụgwọ, ụgwọ ọnwa, ndụmọdụ
Ọmụrụ nwa tax
Alimoni na / ma ọ bụ nkwado ụmụaka
Ihe nkesa IRA a na -atụ ụtụ
Ụtụ ego ezumike nka na afọ
Ego nkwụghachi ụgwọ enweghị ọrụ
Ụgwọ ọrụ na nkwarụ ndị ọrụ
Uru nchekwa nchekwa Social Taxable
N'ezie, uru ọhaneze egosipụtara dịka stampụ nri, SSI, Medicaid, TANF, na CHIP agaghị etinye na ego gị.
Enweghi ike imezu ego achọrọ
Ọ bụrụ na ị na -arụ ọrụ ugbu a ma nwee ego nke na -ezute ma ọ bụ karịa pasent 125 nke ahịrị ịda ogbenye gọọmenti etiti ma ọ bụ (100 pasent, ma ọ bụrụ na ọdabara) maka nha ezinụlọ gị, ịkwesighi ịdepụta ego onye ọ bụla ọzọ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ego ị na -enweta naanị ezughi iji mezuo ihe achọrọ maka nha ezinụlọ gị, enwere ike zute ya site na iji ngwakọta ndị a:
Ndị òtù ezinụlọ
Ego sitere n'aka ndị ezinaụlọ ma ọ bụ ndị ntụkwasị obi bi na ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị dabere n'ụlọ ma ọ bụ ndị ntụkwasị obi edepụtara na nloghachi ụtụ gọọmentị etiti kacha ọhụrụ na ndị dị njikere ịbịanye aka na ya. Ụdị I-864A , ma ọ bụrụ na ha dịkarịa ala afọ 18 mgbe ha bịanyere aka n'akwụkwọ ahụ. Ha bụ ndị otu ezi na ụlọ dị njikere ijikọ aka ọnụ maka nkwado. Ndị otu ezi na ụlọ nwere ike ịbụ di ma ọ bụ nwunye gị, nwa toro eto, nne ma ọ bụ nna, ma ọ bụ nwanne nwoke; Ọ bụrụ na ị nwere ndị tụkwasịrị obi na -enweghị njikọ edepụtara na nloghachi ụtụ gị, ị nwere ike tinye ego ha n'agbanyeghị ebe ha bi. ezinụlọ maka ihe iwu na-akwadoghị, dị ka ego sitere na ịgba chaa chaa iwu na-akwadoghị ma ọ bụ ịre ọgwụ ọjọọ, iji gboo mkpa ego, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na onye ezi na ụlọ ahụ akwụ ụtụ isi na ụdị ego I-864A nke mmadụ abụọ mejupụtara: onye nkwado na onye otu ezinụlọ. Mbinye aka nke ụdị a mejupụtara nkwekọrịta nke onye nwe ụlọ ga -esoro onye nkwado maka nkwado nke ndị akpọrọ n'akwụkwọ a. A ga-ejirịrị ụdị I-864A dị iche maka onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ onye onye nkwado na-eji ego ya na / ma ọ bụ akụ ya. A ga-etinyerịrị fọm I-864A na Mpempe I-864 n'otu oge.
Mbinye aka na mpempe akwụkwọ I-864A ga-abụrịrị nke notari notarized ma ọ bụ bịanye aka n'ihu onye mbata na ọpụpụ ma ọ bụ onye nnọchi anya consular.
Ego mbata nke nwere ike ịbata
Enwere ike iji ego onye mbịarambịa nwere ike bụrụ ma ọ bụrụ na ego ahụ ga -aga n'ihu site n'otu ebe ahụ mgbe mbata na ọpụpụ gasịrị, ma ọ bụrụ na onye mbịarambịa nwere ike ibi ugbu a n'ebe obibi gị. ha ga -aga n'ihu site n'otu ebe ahụ mgbe ọ ghọrọ onye iwu kwadoro na -adịgide adịgide. Ọ bụrụ na onye mbịarambịa kwagara mba ọzọ bụ onye ikwu ọzọ, ego ahụ ga -aga n'ihu site n'otu ebe ahụ mgbe ọ nwetasịrị ọnọdụ obibi iwu kwadoro, onye mbata na ọpụpụ nwere nzube ga -anọnyere gị ugbu a n'ụlọ gị. . A ga-enwerịrị ihe akaebe iji kwado ihe abụọ a chọrọ; agbanyeghị, onye mbịarambịa kwagara n'okwu a ekwesighi imeju akwụkwọ I-864A, belụsọ ma onye mbata na ọpụpụ nwere nwunye nwere nwunye na / ma ọ bụ ụmụaka so ya na-akwaga. N'okwu a, nkwekọrịta ahụ metụtara nkwado di na nwunye na / ma ọ bụ nkwado ụmụaka.
Uru nke akụ gị, akụ nke onye ọ bụla nọ n'ụlọ bịanyere aka na mpempe akwụkwọ I-864A, ma ọ bụ akụ nke onye mbịarambịa kwagara.
nkwonkwo Onye nkwado nkwado nke ego ya na / ma ọ bụ akụ ya hà opekata mpe pasent 125 nke ntuziaka ịda ogbenye.
Gọọmentị nwere ike ịchọ nyocha nke ozi ọ bụla enyere na ma ọ bụ na -akwado ụdị a, gụnyere ọrụ, ego, ma ọ bụ akụ ya na onye were ya n'ọrụ, ụlọ ọrụ ego ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Service Revenue.
Mkpokọta ọnọdụ ego
Ọbụlagodi mgbe enyere m ụdị nkwekọrịta nke I-864, akwụkwọ nkwado, yana mmachibido nke ọtụtụ uru gọọmentị etiti nwere ihe akaebe maka ọtụtụ ndị ọbịa, ndị ọrụ nnọchi anya ga-eleba anya n'ofe nkwado nkwado zuru oke maka ihe ndị ọzọ gbasara ọha.
Ndị Nkebi nke 212 (a) (4) (B) na -edepụta ihe ndị ọrụ onye nnọchi anya obodo ga -echebara echiche mgbe ha na -eme mkpebi ụlọ ọrụ ọha. Akwụkwọ nkwado, Ụdị I-864, bụ naanị otu n'ime ihe ị ga-atụle. Ndị ọrụ ndị nnọchi anya Consular ga -aga n'ihu na -atụle ọnọdụ ego niile nke onye nkwado na onye na -arịọ arịrịọ iji gosi na ọ ga -ekwe omume na onye anamachọihe ahụ ga -enweta nkwado ego zuru oke yana ọ gaghị abụ ebubo ọha. Nke a pụtara ilele afọ, ahụike, agụmakwụkwọ, nka,
Ịnye ọrụ kama ị nweta ego
Onyinye a na -ekwenye ekwenye nke ọrụ maka onye na -achọ visa agaghị edochi ma ọ bụ gbakwunye akwụkwọ nkwado nke ezughi oke. Iwu emeghị ndokwa ọ bụla maka ịtụle ọrụ enyere n'ọnọdụ I-864. N'otu aka ahụ, enweghị ike ịgụta ọnụ ọrụ maka ego opekata mpe pasent 125. Enwere ike ịtụle ụdị onyinye a mgbe ị na -enyocha ike onye anamachọihe nwere ike imeri ebubo ebubo ọha ọ bụla na -ekweghị.
Mgbanwe na usoro ịda ogbenye
Ọ bụrụ na ntuziaka ịda ogbenye gbanwere n'etiti oge onye na-arịọ arịrịọ bịanyere aka na I-864 na nnabata nke visa ndị mbịarambịa, onye na-arịọ arịrịọ / onye nkwado adịghị mkpa itinye akwụkwọ I-864 ọhụrụ. Ọ bụrụhaala na etinyela I-864 na onye ọrụ ndị nnọchi anya obodo n'ime otu afọ site na ụbọchị e binyere ya aka, achọrọ I-864 ọhụrụ. A ga-eme ntule ahụ dabere na ntuziaka ịda ogbenye na-emetụta n'ụbọchị ntinye akwụkwọ I-864.
Ọ bụrụ na ị nweta ụlọ na uru ndị ọzọ a na -ahụ anya kama ịkwụ ụgwọ, ị nwere ike gụọ uru ndị ahụ dị ka ego. Ị nwere ike gụọ ego na -anaghị atụ ụtụ (dị ka ego ụlọ maka ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ndị agha), yana ego a na -atụ ụtụ.
Ị ga -egosi ụdị na ego ego ọ bụla nke agunyeghị dị ka ụgwọ ọnwa ma ọ bụ ụgwọ ọnwa ma ọ bụ ego ụtụ isi ndị ọzọ. Enwere ike igosi ya site na ọkwa na ụdị W-2 (dịka tebụl 13 maka ọrụ ndị agha), Ụdị 1099 ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ na -egosi ego enwetara.
Akụkọ a na -enye nkọwa. Ọ bụghị ndụmọdụ gbasara iwu.
I-864P, Ntuziaka ịda ogbenye HHS nke 2019 maka Mgbapụta Nkwado
Nkwupụta nke Nkwado | USCIS
Ajụjụ ọnụ mbata na ọpụpụ maka ịbụ nwa amaala
Kedu ka esi mara okwu mbata na ọpụpụ NUMBER?
Kedu ihe nyocha ahụike maka mbata na ọpụpụ gụnyere?
Akwụkwọ na -enye ọrụ maka mbata na ọpụpụ
Ogologo oge ole ka nfefe mbata na ọpụpụ na -ewe?
Gịnị bụ mpụ mpụ?
Gịnị Mere My iPhone asị No SIM Kaadị? Nke a bụ The Real Idozi!
My iPhone agaghị ana! Nke a bụ azịza kasịnụ.
Koodu Nkwado iPage | Ezigbo 75% Coupon Coupon Code, Na-arụ ọrụ Na 2021.
NTỤKWU NỌMBA 69: NA NỌWA
My iPhone ọkà okwu na-ada ihe ọjọọ! Lee azịza ya!
Ndi iPhone X enweghi mmiri? Nke a bụ Eziokwu!
iPhone igwefoto-adịghị arụ ọrụ? Nke a bụ ndozi!
Esi Tọgharia iPhone: Nduzi zuru ezu!
Otu esi akwụ ụgwọ tiketi na New York
Etu esi etinye iphone na ọnọdụ DFU, ụzọ Apple
Why Are Yi Confetti Boxes Na Ozi App Na My iPhone?
My iPhone ndetu okụrede! Echegbula. Idozi!
Olee Otú M Gbanyụọ Ozi Mmetụta Na My iPhone? Nke a bụ Ndozi ahụ!
Ihe ndị achọrọ iji zụta ụlọ obibi na United States
Etu ịtọlite ​​ID ihu na iPhone, Easyzọ Dị Mfe!
Atụmatụ onyinye iPhone maka ezumike: Payette Forward’s iPhone Gift Guide
Gịnị Mere My iPhone Nọgide Na-aghọ Dimming? Nke a bụ Eziokwu!